Golaha Amaanka oo Cunaqabateyn dul Saaray jamhada M23 ee Congo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Golaha Amaanka oo Cunaqabateyn dul Saaray jamhada M23 ee Congo
Golaha Amaanka oo Cunaqabateyn dul Saaray jamhada M23 ee Congo
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xalay kulan ay yeesheen kasoo saaray go’aan cunaqabateyn lagu saarayo hogaamiyaasha Jamhadaha M23 iyo FDLR oo ka dagaalama wadamada Congo iyo Rwanda.
Labo kamid ah hogaanka sare ee Jamhada M23 ayaa cunaqabateynta laga saaray dhanka socdaalka iyo waliba dhaqaalaha, waxayna labadaasi hogaamiye kala yihiin, hogaamiyaha shibilka ah ee Jean-Marie Runiga Lugerero iyo mid kamid ah Taliyayaasha Jamhada M23 oo lagu magacaabo Col.Eric Badege.
Sidoo kale Golahu wuxuu cunaqabateyn saaray jamhada FDLR oo ayadu ka dagaalanta dalka Rwanda una badan qowmiyada Hutuga.
Go’aankan Golaha kasoo baxay ayaa lagu sheegay in lagu doonayo in wadada loogu xaaro nabadeynta xiisada ka taagan bariga dalka Congo oo ay dhawaanahan kasoo cusboonaadeen dagaalada u dhaxeeya dowlada Congo iyo Jamhada M23.
Golaha Amaanka ayaan waxa cunaqabateyn ah saarin dowlada Rwanda oo ayadu lagu tuhunsan yahay inay maalgeliso jamhada M23, arrintan ayaa waxaa hor joogsaday dowlada Maraykanka oo ku tilmaamtay tilaabadasi mid caqabado horleh keeni karta.
Maanta oo Salaasa ah ayuu Wadanka Rwanda xubin aan joogto ahayn ka noqon doona Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana go’aankan lasoo saaray saacado kahor intaan Rwanda ku biirin wadamada xubnaha ka ah Golaha Amaanka.